यात्रा गर्दा नगर्नु पर्ने कुराहरु - Victor Mochere
by लिसा विल्सन
यात्रा गर्दा, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले सकेसम्म टाढा रहनुपर्छ। प्रायजसो यात्रुहरूले अनजानमा वा जानीजानी मात्रै गल्तीहरू गरेर आफ्नो यात्रालाई बर्बाद पार्छन्। कुनै पनि यात्राको लागि योजना बनाउँदा, तपाईंको इच्छित गन्तव्यमा थोरै अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिइन्छ। देशको कानुनले तोकेका केही नियम र नियमहरू जाँच गर्नुहोस् कि तपाईंले नयाँ देशमा आफूलाई कुनै नराम्रो पक्षमा फेला पार्नुहुन्न।
यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले यात्रा गर्दा बेवास्ता गर्नुपर्छ।
1. अनावश्यक सामान बोक्ने नगर्नुहोस्
२. आफ्नो सुरक्षामा कहिल्यै सम्झौता नगर्नुहोस्
3. उत्तेजक ड्रेसिङबाट बच्नुहोस्
4. एयरपोर्टमा मनी एक्सचेन्जबाट बच्नुहोस्
5. संवेदनशील मामिलाहरूमा छलफल नगर्नुहोस्
यात्रा गर्दा हामीले गर्ने एउटा गल्ती भनेको हामीलाई हाम्रो यात्राको लागि के चाहिने कुरालाई अतिआकलन गर्नु हो। तपाइँसँग तपाइँको यात्राको लागि आवश्यक आधारभूत चीजहरू निर्धारण गर्न मद्दतको लागि तपाइँसँग स्पष्ट र योजनाबद्ध प्याकिङ सूची हुनुपर्छ। तपाईंले आफ्नो यात्रामा नचाहिने धेरै चीजहरू प्याक नगरी सकेसम्म धेरै बेवास्ता गर्नुभयो भने यसले मद्दत गर्नेछ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ होटेलमा खर्च गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, होटेलले अन्यथा नभनेसम्म तपाईले आफ्नो बेडसिट बोक्न आवश्यक नहुन सक्छ। थप रूपमा, तपाइँको प्याकिङमा सटीक हुनाले तपाइँले निर्धारित तौल भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेर सुनिश्चित गर्नेछ। भारी झोलाहरू तान्नु र बोक्नु तनावपूर्ण र थकाइलाग्दो हुन सक्छ, विशेष गरी तपाईंको यातायातको साधनमा चढ्नु अघि र पछि।
चाहे तपाईं साहसिक कार्य वा व्यवसायको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको सुरक्षामा कहिल्यै सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यसकारण, यात्रा गर्दा तपाईंले गर्ने हरेक निर्णयमा उत्सुक हुनुहोस्। यदि तपाईंले वन्यजन्तु पार्क अनुभव गर्नुभयो भने, सधैं आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रदान गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। केही यात्रुहरूले साहसिक कार्यको लागि आफ्नो सुरक्षामा सम्झौता गर्छन्, सम्पूर्ण यात्रालाई बर्बाद पार्छन्। शहरमा नयाँ भएकोले, तपाईं लगभग सबै नयाँ प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ; यद्यपि, सावधान रहनुहोस्।
तपाईंले जे पनि गर्नुहुन्छ सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न कुनै पनि सान्दर्भिक निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। यदि तपाईंले प्रयोग गरिएको भाषा बुझ्नुभएको छैन भने, तपाईंले जहिले पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूबाट सहायक वा तपाईंको टुर गाइड यदि तपाईंसँग छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईंले एन्टी-थेफ्ट ब्याकप्याक राख्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंको सबै बहुमूल्य उपकरणहरू जस्तै यन्त्रहरू, तपाईं यात्रा गर्दा सुरक्षित छन् भनेर सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, अपेक्षित पतन भएको खण्डमा तपाईंको आवश्यक चीजहरू जोगाउन झोला वाटरप्रूफ हुनुपर्छ।
नयाँ ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुको अर्थ तपाईं विभिन्न संस्कृति र विश्वासका मानिसहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ। त्यसकारण, तपाईंले के लगाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो पोशाकमा सभ्य र नम्र हुनुहोस्। यदि तपाईं पर्यटक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले अनौठो तरिकामा लुगा लगाउनुभयो भने तपाईंले अनावश्यक ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जुन त्यहाँका बासिन्दाहरूको विश्वास र संस्कृतिको विरुद्ध हुन सक्छ। तपाईंले बासिन्दाहरू र तपाईंले अन्तरक्रिया गरिरहनुभएको व्यक्तिहरूबाट विश्वास प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न, तपाईंको ड्रेस कोड उपयुक्त छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यसबाहेक, तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना बनाउनुभएको ठाउँहरूको संस्कृतिहरूमा थोरै अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई चित्रण गर्ने अपेक्षा गरेको व्यवहारको प्रकार निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। तसर्थ, आफ्नो यात्रा लुगा प्याक गर्दा, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले मानिसहरूको दृष्टिकोणलाई विचार गर्नुहुन्छ र यदि तिनीहरूले तपाईंको उपस्थितिको कदर गर्नेछन्।
केही यात्रुहरूले हवाईअड्डामा पैसा साटासाट गर्दा सधैं बिन्दु गुमाउँछन्। याद गर्नुहोस्, यात्रा गर्दा, तपाईं सकेसम्म धेरै पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ र यात्राको प्राथमिक लक्ष्यमा तिनीहरूलाई अधिकतम बनाउन चाहनुहुन्छ। एयरपोर्टमा मनी एक्सचेन्ज महँगो हुन सक्छ। हवाईअड्डामा विनिमय दरहरू धेरै पागल हुन सक्छन् किनकि उनीहरूले तपाईंलाई तुरुन्तै पैसा चाहिन्छ भनेर मान्छन् र त्यसैले तपाईं निराश हुनुपर्छ। यसबाहेक, यदि त्यो देशमा तपाइँको पहिलो पटक हो भने, तपाइँ तपाइँको मनी एक्सचेन्ज गर्न को लागी उत्तम स्थानहरु को लागी पर्याप्त ज्ञान को कमी हुन सक्छ।
तसर्थ, राम्रो विनिमय दरहरूको आनन्द लिनको लागि, तपाइँ यात्रा गर्नु अघि तपाइँको पैसा पहिले नै साट्न वा तपाइँ तपाइँको गन्तव्यमा आइपुगे पछि नजिकको शहर सम्म पर्खनुहोस्। यसबाहेक, आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै, आफ्नो विनिमय गर्दा सावधान रहनुहोस्। तपाईले आफ्नो यात्राको लागि आवश्यक रकम निर्धारण गर्न मद्दत गर्नको लागि तपाई सधैं वर्तमान विनिमय दरहरू अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ।
यात्राको लागि तपाइँको लक्ष्य सबै मार्फत तपाइँको फोकस हुनुपर्छ। तपाई केन्द्रित रहनु पर्छ र तपाईले भ्रमण गरेको देशको आन्तरिक मामिलामा संलग्न हुनबाट जोगिनु पर्छ। उदाहरणका लागि, राजनीतिमा संलग्न नगर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, मानिसहरूको विभिन्न विचारधारा र दृष्टिकोणहरू छन्। तसर्थ, तपाईंले कुराकानी गर्ने मानिसहरूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने बारे तपाईं धेरै उत्सुक हुनुपर्छ।
राजनीतिक-सम्बन्धित विषयहरू संवेदनशील हुन सक्छन्, र यदि तपाईं तिनीहरूमा संलग्न हुनुभयो भने तपाईंले आफ्नो यात्रालाई बर्बाद गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, जाति, लिङ्ग, वा अल्पसंख्यक समूह जस्ता अन्य संवेदनशील मामिलाहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। कतिपय ठाउँले यी विषयलाई राजनीतिले जस्तै गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । तसर्थ, त्यस्ता छलफलहरूमा तपाईंको संलग्नताले अनावश्यक उत्तेजकता मात्र निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंसँग फरक विचारहरू छन्।
तपाईंको अर्को यात्राको योजना बनाउँदा, तपाईंले आफ्नो मुडलाई बिगार्ने र अनावश्यक गडबडीहरू ल्याउन सक्ने कुराहरूबारे सावधान रहनुपर्छ। तपाईंले आफ्नो यात्राको आनन्द लिनुपर्छ र आफ्नो यात्राको समयमा र पछि तनावमुक्त हुनुपर्छ। एकै समयमा रचनात्मक र संवेदनशील हुनुहोस्।
घरमै बनाउन सकिने स्वादिष्ट खानेकुरा